Koorporeeshiniin Sibiilotaa fi Injinariingii warshaalee 12 irratti murtee dabarse – Fana Broadcasting Corporate
Koorporeeshiniin Sibiilotaa fi Injinariingii warshaalee 12 irratti murtee dabarse
Finfinnee, Hagayya 17,2011(FBC) – Koorporeeshiniin Sibiilotaa fi Injinariingii warshaalee qorannaa ga’aa malee ijaarsa eegalchiise 12 irratti murtee dabarse.
Koorporeeshinichi magaalaa Finfinnee, naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraayitti warshaalee ijaarsisu 12f Birrii biiliyoonan lakkaa’amu ramaduun ijaarsa eegalchiiset ture.
Daayreektarri olaanaa koorporeeshinichaa Birgaadeer Jeneraal Ahimad Hamzaan Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, boordiin Koorporeeshinii Sibiilotaa fi Injinariingii ijaarsi warshaalee bu’a qabeessummaan isaanii hin mirkanoofne akka adda citu murteessera.
Yeroo kan barbaadan akka turan, xumuruun kan danda’amu ammoo bara baajatichaatti xumuramanii oomishatti akka galan murteessera.
Proojaktoonni kanneen baasii kanaan duraatin ala baajata dabalataa Birrii biiliyoona 6 ol gaafatu.
Yeroo ammaa xumuruun kan danda’amu Warshaa Raadiyaatara, Koopparii fi Almuuniyamii Maqalee Birrii miiliyoona 25 ol gaafatudha.
Bu’a qabeessa ta’anii hojii hedduun kan isaan hafu Warshaa Kreenii fi Liiftii Dabra Maarqoosii fi Warshaa Sibiilaa Naqamteeti.
Warshaa Sibiilaa Naqamteetti Birrii biiliyoonni 1.3 baasii kan ta’e yammuu ta’u, qorannaa gaggeeffameen baajanni dabalataa Birrii biiliyoonni 1.6 isa barbaachisa.
Warshaa Dabra Maarqoositti Birrii miiliyoonni dhibbi 2 fi miiliyoonni 37 ol baasii ta’eera.
Amma ammaattis ijaarsi hoomtuu hin hojjetamne.
Ijaarsichas xumuruuf baajata dabalataa Birrii miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 37 ol barbaada.
Dhaabbatichi ijaarsicha mataasaatin xumuruu waan hin dandeenyef naannolee lamaan waliin akka hojjetu murtaa’era.
Warshaan Baqsituu Sibiilaa Dabra Birihaan osoo ijaarsisaatuu xumuramee bu’aa isaarra kisaaraa isaatu caala jedhameera.
Amma ammaattis Birrii miiliyoonni 44 itti ba’eera.
Maashini bitameef waggaa 50 kan tajajaile waan ta’eef meeshaalee jijjiirraa hedduu gaafata.
Kanaaf akka dhaabbatu murtaa’era.
Warshaan Tarbaayin Jenereetaraa Finfinneetti ijaarramuu fi amma ammatatis Birriin miiliyoonni 100 baasii itti ta’e, baasii dabalataa Doolaara miiliyoona 64 kan gaafatu waan ta’eef akka dhaabbatu murtaa’era.
Warshaan Suphaa Dabra Birihaan baasii dabalataa Birrii miiliyoona 44 kan gaafatu waan ta’eef, yoo danda’ame hojiisaa adda qooduun xumuruu, yookin ammoo gara bara baajataa itti aanutti dabarsuun murtaa’era.
Haaylayyasuus Siyyuumtu gabaase.
Dr Abiy Ummanni Hadiyyaa falaasama ida’amuu gochaa agarsiisuu isaaniif…
Fiigichi Irrecha Hora Finfinnee nagaan xumuramuu Komishiniin Poolisii Finfinnee…
Dhaabbanni geejiba qindaawaa Odaa buufata rabsaa boba’aa lama ebbisise
Hordooftoonni amantii Kiristiyanaa Ortodooksii magaalaa Baahir Daar hiriira…
MM Dr Abiyyii fi obbo Shimallis abbootii Gadaa waliin…
Abbaan Taayitaa Geejiba Federaalaa daangaa kiilo meetiraa…